Khayre oo ka hadlay deynta qeyb ahaan laga cafiyey Soomaaliya
Wadamada ku jira naadiga Paris ayaa isku raacay in ay dalka ka saamaxaan 1.4 bilyan oo Doolar.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa soo dhoweeyay go’aanka ay Deeq bixiyeyaasha Naadiga Paris dalka uga cafiyeen $1.4 Bilyan oo kamid ahayd deyntii lagu lahaa qarankeena.
Arrinkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo todobaadkii la soo dhaafay hay’adaha dhaqaalaha caalamiga ah (IFI’s) ay dalka ka cafiyeen $830m, taasoo isugeynta lacagta Soomaaliya laga cafiyay illaa iyo hadda ka dhigeysa 2.25b.
Deynta horay loogu lahaa Soomaaliya waxay ahayd $5.2 Bilyan.
Sidoo kale, deeq bixiyayaasha aan xubnaha ka ahayn Naadiga ku bahoobay Paris ayaa iyana ballan qaaday in ay Soomaaliya ka cafin doonaan deynta ay Soomaaliya ku leeyihiin 67% kamid ah, taasoo kor u qaadi doonta daynta laga cafiyay dalkeenna.
Waxaa kale oo ay deeq bixiyayaashu ballan qaadeen in ay daymaha oo dhan ama intooda badan ay ka cafin doonaan Soomaaliya marka ay Soomaaliya kasoo baxdo shuruudaha u harsan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa dalalkan uga mahadceliyay sida ay u garab istaageen dadaallada ay dowladda Soomaaliya dib ugu habaynaysay nidaamkeeda maaliyadeed iyo sida ay uga qeyb qaateen xaqiijinta rajada shacabka Soomaaliyeed.
“Waa tallaabo taariikhi ah oo ka turjumeysa soo nooleynta Qaranimadeena, isla markaana ah guul usoo hoyatay qof walba oo Soomaali ah. Waa dadaal miro dhalay oo u baahan in la joogteeyo”. ayuu yiri Khayre.
Sidoo kale, Khayre ayaa bogaadiyay dadaalka ay hay’adaha dowladda Soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed ku bixiyeen ka mira dhalinta arrintan oo ahayd halbeeggii ugu weynaa ee ay Soomaaliya ku guuleysato 30 kii sano ee la soo dhaafay.
Ra'iisul Wasaare Khayre oo xariga ka jaray Saldhigga Turkiga [Sawirro]
War Saxaafaded 30.09.2017. 15:43
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khare ayaa xarigga ka jaray Saldhigga Millateri ee Turkiga ka dhisay magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu tababari doono Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Khayre oo ka hadlay qabsoomida doorashooyinka xilli uu shaki jiro
Soomaliya 30.05.2020. 00:31
Soomaaliya oo caalamka waydiisatay maalgelin si xal loogu helo daadadka
Soomaliya 30.10.2019. 15:00
Iib-geynta shidaalka ee DF oo lala xiriiriyey ololaha doorashada 2020-21
Soomaliya 17.05.2020. 20:00